Home > Soomaali > Dugsi Hoose & Dhexe
Xaadirinta Goobta : B
Andersen Community School wuxuu ku yaalaa wadnaha beesha ku dhaqan Koonfurta dhexe ee Minneapolis, wuxuuna u jiraa hal sekad the Global Mid-Town Market. Waxaanu isu aragnaa inaan nahay anagu beesha wadnaheedii oo xataa ay naga mid tahay xarun khayraad qoysaska u fidisa. Waxaan nahay xarun wax barasho oo ka filaysa dhamaan ardayda oo dhan iney gaaraan wax barasho hagaagsan, isla markaasa xusta wax tarka dhaqamada badan ee ay beeshayadu ka kooban tahay.
Xaadirinta Goobta: B
Anishinabe Academy waa dugsi dowladeed oo ilaa sideedaad ah K-8. Waxaa dheer mida ah in beeshu ay xulato shaqaalaha dugsiga oo naloo ogaolaaday xornimo aan ku samaysan karno manhaj ka duwan kuwa kale anagoo hoos tagayna gudoonka waxbarshada degamada isla markaasna is kaashanayna ururada American Indian ka ah, shaqaalaha iyo waalidiinta. Waxaa la isu baraa maadooyinka laf dhabarta ah si la mid ah sida adag ee la isugu baro dugsiyada dawlada waxaana sii weheliya oo sii dheer intaa waaqiyo kale oo manhajka oo dhan lagu daray oo ardayda lagu yididiilo galinayo kuwaasoo ku lug leh dhaqanka iyo afka dadka wadanka loogu yimid.
Anne Sullivan Communication Center waxay ku ag taalaa goobo quruxo badan oo Minneapolis ah iyo wabiga Mississippi iyo waliba wadiiqada lugta iyo buskuleetiguba lagu maro ee Minneapolis. Dugsigayaga beeshu wuxuu ku yaalaa meel sharqan yar oo xaafad ah wuxuuna xooga saaraa fanka iyo isku dhafnaanta qaniga ah ee dhaqamada iyo dadyowga. Qoysaska iyo macalimiintuna waa is kaashadaan si ardayda qaar khaas ah oo ka mid ah looga dhiso xisaabta iyo akhriska.
Xaadirinta Goobta : C
Susan B. Anthony wuxuu ku yaalaa xaafad fiican oo Koonfurta galbeed ah. Qiyaastii 745 arday ayaa is qorta fasalada 6-8. Anthony waa dugsi musharax u ah Mashruuca Sanadaha Dhexe. Waxaan ka rajo qabnaa inaan helno aqoonsi dugsiga IB ah. Kuwaasina waa dugsiyada wadaaga falsafada guud ee balanqaadka wax barasho caalami ah oo tayo sare leh oo ah mida ay Anthony aaminsan tahay iney muhiim u tahay ardadayda. Waxaan u fidinaa manhaj adag iyo hab wax barid ardayda – xoogana saara fikirka asaasaasiga ah ee wax barid dhamaystiran, iska war qabka dhaqamada iyo wada xiriirka. Qoysaska iyo ardaydaba waxay heli doonaan deegaan gar gaar iyo amaanba leh oo wax barasho.
Xaadirinta Goobta: A
Anwatin waa rug haysata shahaadada caalamiga ah ee Mashruuca Sanadaha Dhexe iyo tan Dugsiga Dhexe ee Afka Spanish ka iyo luqada kaleba. Mashruuca beesha ee IB gu wuxuu u adeegi doonaa ardayda fasalada 6-8aad ee Galbeedka Minneapolis ee dugsiyada hoose ee afka Ingiriiska wax lagu baro. Mashruuca IB-SDI waa loo sii wadi ardayda dhigata fasalada 6-8 waxaana looga soo bilaabay iyaga mashruuca Emerson iyo Windom ka hor-K-5 SDI. Anwatin oo dhan waxaa wax lagu bartaa iyadoo la isticmaalayo hanaanka wax barasho ee shahaadada caalamiga ah ee sanadaha dhexe. Ardayda wax lagu baro mashruuca SDI qayb ka mid ah wax barashadooda waxay ku qaadan afka Spanish ka qaybta kalena waxay ku qaadan Ingiriis ardayda kalena waxaa wax lagu baraa Ingiriiska.
Anwatin waa rug haysata Shahaadada Caalamiga ah ee Mashruuca Sanadaha Dhexe iyo tan dugsiga dhexe ee afka Spanish ka iyo lafafka kaleba. Mashruuca beesha ee IB gu wuxuu u adeegi doonaa ardayda fasalada 6-8 ee degan Galbeedka Minneapolis ee dugsiyada hoose ee luqada Ingiriiska wax lagu baro. Mashruuca IB-SDI waa loo sii wadi ardayda fasalada 6-8 waxaana loo soo bilaabay iyaga mashruuca Emerson iyo Windom ka hor-K-5 SDI. Anwatin oo dhan waxaa wax lagu bartaa iyadoo la isticmaalayo hanaanka wax barasho ee shahaada caalamiga ah ee sanadaha dhexe. Ardayda wax lagu baro mashruuca SDI qayb ka mid ah wax barashadooda waxay ku qaadan luqada Spanish ka qaybta kalena waxay ku qaadan Ingiriis ka, ardayda inteeda kalena waxaa wax lagu baraa Ingiriiska.
Xaadirinta Goobta: C
Armatage Montessori waa dugsi sharqan yar oo fasalada K-5 ah oo ku yaal Koonfur/Galbeed ka Minneapolis. Dulucdana waa in la abuuro deegaan wax baro oo ababiya gaarida hadafka wax barasho ee la dooni, jeclaan wax barashada ah, iyo xaq dhowr guud. In kastoo ardayda laga filanyo iney helaan aqoonta iyo xirfadaha u dhigma kuwa manhajka dugsiyada dowladu u baahan yahay, hadana Montessori waxa uu xooga saaro waxaa ka mid ah, wax barasho khaas u ah arday walba si loo gaarsiiyo dulucdooda wax barasho. Ujeedadayadu waa in la dhiso aasaas nolol –xirfadeed, si ay u noqdaan kuwa noloshooda oo dhan wax barta, taabo galna noqda, dhib kasatana xaliya.
Bancroft Elementary wuxuu doonayaa inuu noqdo xarun shahaadada caalamiga ah haysta. Mashruucan Shahaadadan ee caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay laga qadariyo qaab uu ardayda wax wax u baraa waa mid dhinac walba ka tafa tiran. Ardaydu waxay kororsadaan fahan balaaran oo ah qadiyadaha aduunka iyagoo kolkaa baarid ku samaynaya "Unugyo kala duwan" oo fasal walba
ah xoogana saaraya: aqoonta, xirfadaha, xeelada, dabeecadaha. Tani kolkaa waxay ardayda ku baraarujinaysaa dareen xoogan oo ah doorkooda ama mas’uuliyadooda bini aadanimo ee saaaran. Shaqaalaha Bancroft waxay diyaar u yihiin iney la shaqeeyaan qoysaska si loo hubiyo in dhamaan ardayda oo dhani ay si firfircoon uga qayb qaataan wax barashada. Sida hada ka hor waalidka mid ka mid ah kuwa Bancroft uu yiri, "Wax barashada waa ku farxaan ilmahaygu, iney dugsiga aadaan way rabaan maalin walba. Ilmaha dugsiga kala duwanaan shahooda, fursadaha wax barsaho iyo waliba manhajka lagu daray fanka ayaan ilmahayga siinaya waxbarasho hagaagan oo dugsiga dhexe ah."
Barton Open School (K-8)
Barton Open School wuxuu soo ababiyaa beel wax bartayaal fir fircoon ah oo xudunteedu tahay in ilmo kastaa uu khaas yahay. Wax baridana waa mid shakhsiyan laga dhigay oo la raaco manhaj wajiyo badan leh si loogu dhiiri galiyo jecelka wax barasho oo wax lagu dhex baranayo beel is qadarisa.
Bethune Community School wuxuu ku yaalaa Waqooyiga Minneapolis khaasatan xaafada dhawaan dib loo dhisay ee Heritage Park. Waxaan u adeegnaa koox kala duwan oo ka kooban 350 oo ilaa fasalka K-5 ah. Ardaydayada oo ay ka mid yihiin kuwa mashruuca wax barida khaaska ah ee ilmaha madaxa naafada ka ah ee fasalka K-5, ardayadu waxay helaan fursad ay wax ku bartaan jawi wacan oo amaan ah isla markaasna dhisa dareen xoogan ee bulshanimo. Bethune Community School wuxuu garawsan yahay xoogana saaraa muhimada ay lee dahay wada shaqaynta lala shaqeeyo beesha iyo qoysaskaba waxayna u go’day iney u noqoto rug gargaar dhamaan xaafada dugsiga ku wareegsan.
Xaadirin Goob: A
Bryn Mawr Community School waa dugsi beeleed wacan oo wanaagsan kaasoo xusa kala duwanaanshaha ardaya iyo wax barida kali kalida ah. Shaqaalahayaga la carbiyey si wada jir ah ayey u shaqeeyaan si ay u haqab tiraan baahida wax barasho ee ardayda, si markaas ilmo walbaahi uu u guulaysto. Xiriirka is gargaaridu waa xudunta hanaankayga wax barida!
Waa ku guulayste 2008dii abaal marinta ay bixiyaan ururka maamuleyaasha dugsiyada dhexe ee Minnesota, Burroughs Community School wuxuu ku yaalaa daanta warta quruxda badan ee Minnehaha Creek, una dhow Lake Harriet. Goobtan dabiiciga ahi waxay bixisaa xiriir dhex mara manhajkayaga sayniska iyo shaybaarkayga noolaha. Ardayayada deegaankan dabiiciga ah ee ku hareeraysan waxaa sii tayo galiya dhaq dhaqqayada dibada ee dhinaca sayniska fanka iyo jimicsiga ah. Hal ku dhagayagu waa : Dhaqan wax barasho oo wacan!
Cityview waa dugsi fasalada 6- 8 ah manhajkana ku darta fanka. Waa deegaan amaan ah oo ilmo badani ay ku dhamayn karaan dugsiga dhexe. Waxaan midaynaa macalimiinta, qoysaska iyo beesha si aan u taakulayno dabacsanaan la’aanta aan ka rabo ardadayada. Wadajir, waxaan u siinaa ardayda kaalmada ay u baahan yihiin si ay u gaaraan wax barashadooda xisaabta iyo akhriska ah. Si aan si dheeraad ah ugu sii xoojino amaanka dusigayga ardayduba iyo macalimiintuba yunifoon bay xirtaan.
Xaadirinta Goobta: none
Cyber Village Academy (CVA) waa dugsi dowladu maamusho oo lagu dhigto fasalada 3 aad ilaa 8 aad. Wuxuu ku yaal xaafada St. Paul's Energy Park Drive. CVA waxay bixisaa fursado wax barasho oo adag o ay labo mashruuc oo kala duwan ugu kala fidiso ardayda xawaaxigan – mid waa the Fusion Program iyo PASCAL (Program for Accelerated Studies Using Computer-Assisted Learning). Fadlan si toos ah ula xiriir dugsiga si aad u ogaatid gaadiidka aad rabtid inaad xulantid ee ku keeni dugsiga.
Hadafka Dowling Urban Environmental Learning Center: Jiritaankayagu waa inaan ku baraarujino waxna ku barno ilmaha goob gargaar wax barasho leh taasoo keeni kalsooni, madax furnaan iyo ilaalinta deegaanka.
Elizabeth Hall International Elementary School waxuu bixiyaa deegaan wax barasho oo ka duwan kuwa kale halkaas oo ay shaqaaluhu heegan u yihiin iney bixiyaan wax barasho adag taasoo ka caawinaysa ardayda iney aqbalaan dhibka si ay wax ula qaybsadaan umadaha aduunka. Waxaan balan qaadaynaa inaa samayno oo aan wax barno ardayda oo dhan ah iyo inaan ka saacidno koridooda dhinaca bulshada iyo caadifadaba ah, iyo waliba inaan abuurno deegaan nidaamkiisa wax barashadu uu adag yahay, isla markaas leh ababin iyo farxad.
Xaaadirinta Goobta: A, B, C
The Emerson Spanish Immersion Learning Center (Emerson SILC) waa mashruuc labada laf lagu barto oo u adeega ardayda English iyo Spanish ba ku hadasha ee ku dhaqan Minneapolis inteeda badan. Emerson SILC wuxuu ku dhex yaalaa xaaafada Loring Park waana goob dhifa ah oo loogu tala galay iney caawiso barashada afka. Fasalka labaad iyo wixii ka horeeya, ardaydu waxaa wax lagu baraa boqolkiiba 90% afka Spanish ka boqolkiiba 10% waxaa wax lagu baraa afka English ka. Tani kolkaa waxay u ogolaan ardayda iney yeeshaan aasaas adag oo afka Spanish ah taasoo ay sii dhisi intey ku jiraan dusgsiga hoose. Tartiib tartiib ayey ardaydu u kordhin wax barashadooda English/Spanish ah ilaa saamigu uu gaari 50/50 fasalka 5 aad. Ardaydu waa bartaan labada af ee English iyo Spanish. Ardayda labada koox ee kala luuqada ah ka koobani isku fasal bay wax ku baran karaan iyadoo bar u ku hadli Spanish barka kalena English. Degaankan wax barasho ee dhaqan ahaan qaniga ahi wuxuu ka caawin iyaga kordhinta fahankooda ee iyaga naftooda ama dadyowga kale ah.
FAIR School Crystal waa dugsi degmada oo dhan ka dhexeeya oo fanka looguna tala galay ardayda kala du duwan ee tobobada degmada ee WMEP: Brooklyn Center, Columbia Heights, Eden Prairie, Edina, Hopkins, Minneapolis, Richfield, Robbinsdale, St. Anthony/New Brighton, St. Louis Park and Wayzata (Qiyaastii 240 arday oo reer Minneapolis ah ayaa dhigata). Waxaa la isku qori karaa codsi in la sameeysto ama bakhtiyaa nasiib.
Xaadirinta Goob: none
FAIR School Downtown waa beel farshaxanka iyo baabab khayraadba leh, gacana ka helsha kala duwanaanshaha ardayda iyo u go’doomida helida wax barasho iyo shacuurta fanka ah ee wacan. Waxaanu balan qaadaynaa sinaan iyo wacnaan ah dhamaan ardayda, Waxaana meesha ka saaraynaa wixii carqaladku ah gaaritaanka fursadaha si aan ugu diyaarino ardayda iney aduunka higsanadaan.
Field Community School (5-8 )
Xaadirinta goob : C
Hale/Field Community School waa dugsi K-8 ah oo ku yaal labo meelood. Field waxay u adeegtaa ardayda fasalada 5-8 aad waxayna ku taal xaafada Field/Regina/Northrop ee koonfurta Minneapolis. Hadafka Hale/Field Community School waa in la hubiyo in dhamaan ardayda oo dhani wax bartaan. Si taa loo helo waxaan heegan u nahay inaan siino dhamaan ardadayada oo dhan fursado ay ku gaari karaan waxbarashadooda ugu heer sareysa iyo bulsho, caadifad, iyo deegaan amaan ahba.
Waxaan fidinaa manhajka fanka-barxan iyo fan-khaas ah ee dhinaca muusiga, ciyaarka, masraxa iyo fanka muuqaalkaba ah. Manhajkayagu waa mid wax barid fadhida ah ayna ka mid yihiin maadooyinka laf dhabarta ah: akhriska, xisaab, saynis, bulshada, wax barashada saxada. Waxaan aaminsanahay wax barashada fanku iney tahay sida ugu roon ee ardayda loogu diyaarin karo wax barasho dheer.
Wuxuu ku yaalaa Koonfurta Minneapolis, daqiiqo ayuu u jiraa Miracle Mile (dib u habayn Lake Street) wuxuu kaloo ku ag yaalaa dhowr goobood oo lagu ciyaaro. Richard Green Central Park waa dugsi manhajkiisu xooga saaro hogaaminta, barashada sayniska, xisaabta, xirfadha qarniga 21 aad iyo akhriska. Si loo helo degaan amaan ah, waxaan mar kasta ku dadaalnaa sidii looga dhex samayn lahaa xiriir nabadeed iyo mid is xaq dhowr shaqaalaha, ardayda, waalidka iyo beesha kale dhexdeeda .
Xaadirinat Goobta: C
Hale waa dugsi aad loo doono helidiisa kuwa faana taariikhdiisa wax barashada wacan ah ee ah dhinaca fanka iyo muusiga ah. Hale waa dugsi xaafadeed la dhisay 1930's oo inta badan u adeega qoysaska dhalinta yar wuxuuna lee yahay mashruucyo ah sida: ilmaha Minneapolis (xanaandada- ilamaha da’da dugsi), ECFE, akhrin iyo dugsiga ka dib/wax u dhigid. Hale qoysaskiisa kala duwani waxay ku hadlaan todobo af waxayna keenaan 400 oo qof oo tabarucayaal ah sanadkiiba.
Hiawatha Community School waa dugsi ilmo kala duwan dhigtaan wuxuuna ku yaalaa meel looga lugayn karo Minnehaha Falls ee koonfurta Minneapolis. Maamulaha iyo shaqaaluhuba waxay heegan u yihiin dhaqan galinta xeelado wax barasho oo ad adag oo loogu talo galay in si fir fircoon ardayda wax barideeda laga wada qayb qaato. Macalimiinta iyo shaqaalaha gacan siintuba waxay ardayda wax u baraan hanaan isu miisaaman oo xisaabta iyo fartaba ah. Hiawatha waa rug mashruuc dugsigayda ciwaanka loo yaqaan ah. Waxaan abuurnay oo qadarinaa is kaashiga ka dhexeeya , qoysaska beesha iyo dugsiga. Waxaan helnay abaal matinta wax barida wacan ee MESPA.
Xaadirinat Goobta: A
Hmong International Academy (HIA) waa mid ka mid ah dugsiyada dowlada ee Minneapolis ee ka fasalka K-8 aad . HIA waxay fidisaa mashruucyo wax barasho oo ad adag ee dhinaca akhriska, qorida iyo xisaabta ah. Dhamaan maadooyinka laf dhabarta ah waxaa la isku baraa afIngiriiska. Si loo hubsado iney ardaydu si fiican wax u bartaan lagana soo baxo baahidooda wax barasho, HIA waxay is kaashanayaan hay’adaha beesha si ay u helaan ardaydu fursado badan oo wax barsho iyo hogaamin ba ah xiliga mashruuca halka saac ah ee dugsiga ka dib ah. HIA waa dugsi Hmong oo ardayda lagu soo aruuriyo oo fidiya wax barasho wax kastaa ku jiraan oo adag si gaar ah xooga u saara farta afka Hmong, afka, iyo dhamaan dhaqamada ardayda laga soo bilaabo dugsiga ka hor ilaa iyo fasalka 8 aad. Hmong International Academy waxay soo dhawaynaysaa dhamaan ardayda doonaysa iney kordhiyaan fahankooda la xiriira dhaqanka iyo afka Hmong ah.
Jefferson waa dugsi beeleed ku yaala bartanka baladka kore ee Minneapolis. Ka qayb galka qoysaskayaga iyo beesha nagu hareeraysan ayaa gacan ka gaysta deegaankayaga wax barasho oo ah mid ababin iyo garaad dhisid isugu jira. Waxaa la heli karaa oo ay xaafadu lee dahay waxyaabo badan oo lagu raaxaysto waxaa kale oo ay qosyaska iyo ardaydaba ay heli karaan fursado dhaqameedyo.
Wuxuu ku yaal xaafada Lind Bohanan ee u dhaxaysa Shingle Creek iyo wabiga Mississippi River, Jenny Lind School waa xarun wax barasho oo fasalada sare-5, iyo K-4 lagu dhigo. Waxayna heegan idiin la tahay iney siiso mashruuc wax barasho oo caalami ah beeshayada kala duwan. Shaqaalahayaga khibrada lahi waxay fidiyaan manhaj loo tolay baahida wax barasho ee khaaska ah ee ilamahayga.
Waa dusgi beeleed dhab ah kaasoo ay qoysaska ugu kulmaan si joogta ah, waana yar nahay oo waan naqaan ilmo walba. Wuxuuna ku yaal Koonfur galbeedka Minneapolis inta u dhaxaysa Grass Lake iyo Minnehaha Creek, Kenny Community School wuxuu fidiyaa manhaj iyo shaqaale xooga saara deegaanka, iyo dikhada, wax barasho adag iyo ardayda ka qayb galkeeda. Waalidiintayada shaqaalaha iyo beerta dugsiga ee ay ardadu sameeyeen iyo fasalka banaanka lagu qaataba waxay u yihiin shaybaar ardaydayada si ay ugu bar bartaan waxa ay ku baranayaan sayniska, xisaabta, bulshadaiyo akhriska. Deeqdayada badan ee fanka iyo xiriirka aan la leenahay ururada bulshada waxay ka caawiyaan ardayda iney kororsadaan fahan ah nafaqada, xarakada, muusiga iyo fanka. Ardayda, waalidka iyo shaqaaluhuba waxay wadaagaan hogaaminta: wada jir bay u shaqeeyaan si ay u soo saaraan wadaniyiinta mas’uulka ah ee mustaqbalka. Si aad ku fahantid Kenny dhabtii waxaad u baahan tahay inaad na soo booqatid. Hore noogu imow si aad u aragtid waxa aan nahay!
Kenwood Community School waa dugsi K-5 ah oo ku yaal bartanka xaafada Kenwood ee Minneapolis. Isagoo leh taariikh 120 sano ah, dugsiga Kenwood wuxuu is ku darsaday asagoo leh macalimiin baraarugsan oo u go’oomay wax barid iyo hogaamin maamul oo wacan iyo iyadoo waalidku si aan caadi ahayan ugu lug llee yahay wax barida ilmaha si markaa loo siiyo ilmaha deegaan amaana oo ababiya, halkaas oo ilmaha Kenwood iyagoo jecel wax barashada ay wax ku baraan kuna koraan. In kastoo Kenwood uusan lahaan doonin sidii waagii hore fanka shahaadadiisa, hadana aragtidaydu waa isku mid, waxaana lagu soo jimcin karaa hal ku dhagayaga: "Xariifnimo + Fanka = Dugsiga Kenwood."
Lake Harriet Community School (LHCS) waa dugsi K-8 ah oo kala leh labo rugood oo ku yaal bartanka xaafadaha the Fulton iyo Linden Hills. Rugta hoose ee fasalada K-2, waxay tahay goob aad ugu haboon wax bartayaasha dhalinta yar. LHCS waa mashruuc qadiimi ah oo fasalada ay xiran yihiin ilaa ardaydu ay ka gaarayaan sanadaha fasalada dhexe markaas oo in ardayda laysku bed bedelo saacada walba. LHCS wuxuu qayb ka yahay barnaamijka Xulashada Dheeri waa Mashruucaaga, is kaashigana la leh Xaafada Waqooyiga Minneapolis.
Lake Harriet Community School (LHCS) waa dugsi K-8 ah oo kala leh labo rugood oo ku yaal bartanka xaafadaha Fulton iyo Linden Hills. Rugta kore, fasalada 3-8, waxay fidisaa manhaj adag oo ay ku fidiso deegaan qalabaysan a. LHCS waa mashruuc qadiimi ah oo fasaladu ay xiran yihiin ilaa ardaydu ay ka gaarayaan sanadaha fasalada dhexe markaas oo ardayda laysku bed bedelo saacad walba. LHCS wuxuu qayb ka yahay barnaamijka Xulashada Dheeri waa Mashruucaaga, is kaashigana la leh Xaafada Waqooyiga Minneapolis.
Keewaydin waa rug dugsi dhexe oo xaafadeed ah ee fasalada 4-8 ah. Waxaana rugta iyana isticmaala mashruuca dugsiga kore ee Lake Nokomis Community School. Keewaydin hadafkeeda waa in dhamaan aydayda ay najaxaan inta ay dugsiga joogaan iyo iney ku dadaalaan fursado wax barasho oo ka sii siyaaso ah dugsiga sare. Sidaa awgeed manjahkaygu waa adag yahay. Mashruucayagu waa kooban yahay, taasoo keeni in la helo beel isku duuban. Sida oraahdayu lee dahay, " Waxaan ababinaynaa rajo wayn." Dugaigayaga hoose ee aan is kaashanaynaa waa Wenonah school.
Wuxuu ku yaalaa xaafad sharqan yar, loogana lugayn karo harooyinka iyo goobaha kale, waxaad heli doontaa Lake Nokomis Community School - Wenonah Campus. Dugsigan beeshu wuxuu ku dadaalaaa hirgelinta wax barasho heer sare ah iyo dhaqan wacan. Wenonah waxaa kaloo jooga ardayda fasalada K-3 ah oo ku hoos jirta kuwa mashruuca fasalada K-8 ee the Lake Nokomis Community School . Ardaydu waxay aadaan Keeywaydin marka ay gaaraan fasalka afraad. Ardaydu waa ay joogi karaan Lake Nokomis Community ilaa iyo fasalka 8 aad. Dugsagani runtii waa " Dugsi magaalo wayn hadana leh qalbi magaalo yar.”
Hadafka Loring Community School waa wax barida ilmaha ee abidka ah waxaa wax lagu bari deegaan xaq dhowr ku dheehan yahay kaasoo gargaara noqoshada ay noqonayaan, war qabayaal, xirfad leh, oo mas’uul ah iyo waliba wadani kalsooni isku qaba oo awoodi kara inuu meel ka soo baxo ha noqoto shaqada ama noloshooda shakhsigaba. Waxaan nahay dugsi xanaano iyo xaq dhowr ba leh, halkaas oo qoysaska, ilmaha, shaqaalaha iyo beeshuba ay wada jir u wada shaqeeyaan , si ilmaha oo dhani ay aayahooda ugu sareeya gaaraan.
Lucy Craft Laney ee Cleveland Park waa dugsi beeleed ka ilaa fasalka -K-8 aad ah. Waxaan haynaa in ka badan 600 oo arday waxaana fidinaa mashruucyo badan oo wax barasho kuwaas oo gar gaara wax barashada. Xiligan wuxuu u yahay Lucy Craft Laney Community School waqti farxadeed maadaama aan ku dhex jirno xili uu is bedel wayn uu socdo is bedelkaas oo loogu tala galay inuu xoojiyo mashruucyada wax barasho ee dhamaan ardayda la siiyo. 2010, Lucy Laney waxay wasaarada Waxbarshadu siiisay $1 million oo dugsiga lagu hagaajinayey si loo caawiyo ardaydu iney boobsiiyaan gaaritaan natiijada ay doonayaan. Dugsigu hada wuxuu fidiyaa wax barasho dheer oo maalintii oo dhan ah taasoo siisa ardayda waqti gacan siin ah oo xooga saara baahida u khaaska ah arday walba.
At Lyndale Community School ilmahu waxay bartaan manhaj xoogan oo lagu barxay fanka, oo ku jiro masraxa ilmaha, masrax duureed, codka iyo iskaashiyo fanka ah. Fasal walba ardayda waxaa la baraa aqoonta laf dhabarta ee ku salaysan cilmi baarida taariikhda, sayniska,Joqoraafiga, barashada beesha iyo fanka. Wax barshada kala hor horaysaa waxay u fidisaa ardayda aqoon baahsan oo ku saabsan taariikhda, saynis ka iyo mawduucayada dhaqan-dhaqaale. Lyndale ardaydiisu waa fir fircoon yihiin si fiicana wax bay u bartaan, xaqna dhowrna xaqa ay lee yihiin wixii aragtiyo ah ee ka duwan kuwooda.
Xaadirnta Goobta: A
Marcy Open waa dugsi beeleed halkaas o dhamaan dadkoo dhami ay yihiin macalimiin iyo arday. Mashruuca falsafada furan ahi wuxuu baraa ardayda iney xulasho shakhsiyeed samaystaan oo ay madax banaanaadaan, isla markaana yeeshaan deegaan wax barasho oo is kaashi. Qofka kasta waa lagu soo dhowayn miiskayaga wax barashada! Hadii aan nahay Marcy waxaan rumaysan nahay jecel ka wax barashadu inuu yahay mid la is qaad siin karo. Imow oo na soo booqo!
Minnesota School of Science (K-8 (qaadanaya K-5 kaliya sanadka 2012))
The Minnesota School of Science (MSS) Waa dugsi dowlada oo jaamcada loogu diyaar garoobo, oo wax bara ardayda fasalka kow ilaa shanaad ah K-5. Waxaan ku dari donaa hal fasal ilaa aan ka gaarayno fasalka 8aad. Mashruucu wuxuu dhaqan galiyaa hanaan wax barasho oo la xaqiijiyey oo horey loogu guulaysatay oo ay abuureen Concept Schools. Fadlan dugsiga si toos ah ula xiriir si aad u ogaatid wixii xaga gaadiidka xulashadiisa ah..
Mona Moede wuxuu fidiyaa mashruuc maalintii oo dhan ah ee loo yaqaan High Five. Mashruuca High Five wuxuu heegan u yahay inuu bixiyo manhaj ku salaysan muujiyaha lagu ogaado wax barashada hore u socodkeeda ee ilmaha ee Minnesota. Barida iyo wax barashada mashruuca High Five waxaa loogu tala galay iney ka caawiyaan ilmuhu iney samaystaan aqoon xasaasi ah oo u ogolaan doonta iney najaxaan marka ay dugsiga bilaabaan. High Five wuxuu heegan idiin la yahay inuu bixiyo wax barid qani ah oo macne leh oo ay u qasan tahay xirfado aasaasi ah .
Nellie Stone Johnson Community School wuxuu ku yaal waqooyiga Minneapolis xaafada Hawthorne. Dhismahan dhawaan la dhisay wuxuu lee yahay shaybaaro cusub ee Kombuutarka ah iyo fasalo cusub oo casri ah oo qarnigan 21 aad la socda. Waanu rumaysanahay oraahda, "Xariifnimadu ma aha wax aad tahay ee xariifnimadu waa wax aad gaartid."
Northeast Middle School – Mashruuca Shahaadada Sanadaha dhexe Loo Ogolaaaday (6-8)
Isagoo ku yaal meesha quruxda badan ee St. Anthony Parkway, Northeast Middle School (grades 6-8) waa dugsi ardayda xooga la saaro oo ka mid ah dugsiyada Mashruuca Shahaadada Sanadaha dhexe ay dhigtaan 448 arday. Northeast waxay ku faantaa manhajkeeda adag, jawigeeda dugsiga ee wacan, iyo shaqaaaheeda dugsiga ee ababinta iyo gargaarka fiican bal leh. Dhamaan ardayda dhigata NEMS waxaa lagu booriyaa iney is dhibaan oo ay ka qayb qaataan dhamaystirka hawlaha ad adag ee fasaladooda. XaafadaThe Northeast waa bilan tahay, fan leedahay waana beel aad ugu gargaarta oo ku taxa luqda adeegyada wax barashada ee qaniga ah.
Rugta dugsiga wax barashada beesha ee Northrop Urban Environmental community school waxay ku taal koonfurta Minneapolis waxayna lee dahay sumcah ah in si fiican wax loogu barto. Lake Nokomis, Lake Hiawatha iyo Minnehaha Creek intuba waxay u jiraan dugsiga daqiiqado waxayna siiyaan fursado wanaagsan ardayda oo ay ku sahamin karaan deegaanka magaalada. Wax barashada waxaa lagu daray deegaanka si loo muujiyo ilaalinta deegaanka waxaana la ticmaalaa oo fursado loo helaa in banaanka wax lagu barto si bartayaasha loogu diyaariyo iney si heer sare ah u fakaraan. Northrop waxay siisaa fasalo loo yaqaan STEM (Saynis, Farsamo, Muhindisnimo, Xisaab) ardayda dhigata 1-5. Adkaanta sare iyo dadaal ayaa hagi arday kasta si uu u gaaro wax barashadooda.
Olson U waxaan dadaalkayaga isugu gaynaa hirgelinta wax qabsiga ardayda iyo dhisida xiriir fiican oo dhex mara ardayda sshaqaalaha iyo beesha. Hadafkaygu sanadkan waa inaan abuurno hab dhaqameed gelinaya maskaxda ardadayada garaad, caado shakhsi ama mid qofeedba taasoo muhiim u ah u diyaarin loo diyaarinayo iney jaamacada ku guulaystaan.
Pillsbury School, waa rug wax barasho dhamaystiran leh, waxayna ku taal Waqooyig bari ee Minneapolis. Waxaan u adeegnaa ardayda dugsigiyada dowlada ee dhigata fasalada ka horeeya is qorida ilaa fasalka shanaad iyo waliba ECSE iyo kuwa loo yaqaan ardayda FASALKA . Pillsbury waa meel soo dhawaysa dhamaan ardayda iyo qoysaska una fidisa barnaamijyo lagu barto afafka hooyo sida luqada Spanish, gar gaar labo af ah ee afka Somali da iyo barnaamij loogu tala galay ardayda hibada wax barashda u leh. Pillsbury School wuxuu u adeegaa in ka badan 600 oo arday kuwaas oo 52 boqolkiiba ah kuwa bartayaal luqada Ingiriiska ah, taasoo dusiga u bedeshay mid beelaad meeshii markii hore uu ka ahaa mid aruurin wali waanu sii wadnaa xoog saarkii xisaabta/sayniska/ farsamada.
Pratt Community School waa dugsi ah ilaa fasalka shanaad ah K-5, xiriir xoogan oo beesha caalam kana leh, oo ka ay jiraan barnaamijka laba af laha ah ee Somali ga, barnaamijkaas oo qayb ka ah beeshan dadyowga kala duwan ah ee ay ardadayadu ku dhex nool yihiin. Pratt School wuxuu ku dadaalaa sidii loo heli lahaa deegaan ay dhamaan ardayda iyo qoysaska aysan ka qaloonayn oo ay ku dareemi xasilooni, deegaan caadooyinka badan leh waa la jecel yahay in kaastoo hadana arday waliba uu heli waayo aragnimo wax barasho oo fir fircoon oo isaga khaas u ah. Hadafyada oo dhamni waa in ilmo kastaahi uu helo jawi wax barasho oo wacan. Fanku waa qayb ka mid ah dhamaan ardayda wax barashadeeda.
Xaadirinta Goobta: B, C
The Ramsey International Fine Arts Center aragtideedu waa in uu sameeyo waxa ilma kastaa uu jecel yahay inuu sameeyo ee fanka la xiriirta. Ramsey ardadiisu waa kala du duwan yihiin waxaana raadinaa wax barasho adag oo maada kasta ah, fahanka caadooyinka, iyo hal abuurid aan ka baxsanayn oo hoos imaanaysa manhajka wax barashada ee laysku daray.
Sanford waa beel yar oo xanaano leh, waxaan u dhow dahay daan wabiga Mississippi River. Ardayda, macalimiinta, iyo waalidiintuba wada jir ayey uga wada shaqeeyaan si ay u abuuraan waayo aragnimo wax baraho oo adag. Laga soo bilaabo barnaamijka fanka xorta ah ee hore ee la boobsiiyo ilaa iyo gar gaarka shakhsiyan ah iyo la fariisad wax barida keliga ah. Sanford waxay higsataa in arday walba loo sameeyo wa barasho u khaas ah isaga.
Seward Montessori School wuxuu ku dhagan yahay Matthews Community Center/Park wuxuuna ku yaal xaafad sharqan yar oo ku taal koonfurta bari ee Minneapolis. Waxaan nahay rug wax barasho, aqbalana arday ka soo kala jeeda dhaqamo iyo dadyow kala duwan. Waxaan ababinaa wax is waydiin, u kuur galid iyo xaq dhowr deegaankayaguna naxariis iyo diiranaan ayuu lee yahay. Ku lug lahaanta waalidka ee xoogan iyo gar gaar ka beeshuba waxay keenaan kobcinta ardayda Seward.
Hadafka: In la abuuro, dhaqan faneed fakar keena, kaasoo awood ah geliya ardayda iney noloshooda wax bartayaal noqdaan. Sheridan School waa dugsi ardayda lagu soo aruuriyey oo ilaa fasalka K-8 fanka ah lagu dhigto, waxaana dhigata 650 arday, wuxuuna ku yaal koonfurta bari ee Minneapolis. Wuxuuna lee yahay taariikh ah barida fanka. Sheridan wuxu bixiyaamanhaj iyo wax barida qoreyaasha iyo akhriyeyaasha, xisaab baarida, FOSS Sayniska, Xisaabta hore, saxida akhrinta, fanka gaarida wax barshada, fanka isku darka, qoraalka hal abuurka, kooxda muusiga garaaca.
Waite Park Community School wuxuu ku yaal xaafad qurux badan oo Waqooyiga bari ee Minneapolis ah, Wxuuna dhul la wadaagaa mashruuc iyo barxadaha ciyaaraha. Shaqalaahaha carbisani waxay heegan u yihiin iney siiyaan wax barasho hagaagsan dhamaan ilmaha oo dhan kuna siiyaan deegaan amaan iyo nabad gelyaba leh. Waite Park Community School wuxuu lee yahay mashruuc xiiso leh oo fasalada ka dib la galo. Golaha Waite Park iyo Waite Park PTA ayaa iyana si fir fircoon ugu gar gaara halgankayaga wax barasho.
Whittier International Elementary IB World School wuxuu u fidiyaa dhamaan ardayda oo dhan fursad ay ku heli karaan wax barasho adag, oo kala nooc nooc ah oo u kuur gal ku salaysan, wax barashadaas oo la rabo iney ka caawiso ardayda sidii ay ku noqon lahaayeen kuwa noloshooda oo dhan u hibeeya wax barsaho caalami ah, cod kornimo taabo gal ah, hal abuur wax hindisa iyo ma shalaayeyaal khatarta ogol. Iyadoo la adeegsanayo unugyada u kuur galida iyo isku xirka fanka ardaydu waxay muujiyaan caadooyinkooda guriga, samaystaana hindise caalami ah qaabilaana dhibabka si markaas ay u gayeysiiso iyaga iney ku najaxaan koonka aduunkan. Whittier waa meel ay ilmahu horu mariyaan dareen xoogan oo ah cida ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen, si marka labadaa laysku xiro ay u horu mariyaan qaabab duwan oo uu ugu muuqdo aduunka ku hareeraysan si markaasna ay dhabtii u kororsadaan ra’yiyo caalami ah.
Windom Dual Immersion School (Spanish/English), waa dugsi yar oo ilaa fasalka shanaad K-5 lagu dhigto, dugsigu wuxuu ku yaal xaafada la yiraaho Windom oo geedo badan, wuxuu u adeegaa arday kala du duwan, wuxuuna bixiyaa waayo aragnimo wax barasho oo qiimo leh oo ay ardaydu bartaan manhaj isku wada heer ah iyadoo wax lagu baranayo labada af ee Spanish iyo English. Dhamaan ardayda oo dhami waxay gaaraan heer ay si fiican u bartaan labada af ee English iyo Spanish. Ardayda labada afba isku fasal ayey si wada jir ah wax ugu bartaan, halkaas oo inat badan, bar ardayda uu afkooda hooyo yahay Spanish halka uu barka kalena ka yahay English. Fasalka koowaad iyo wixii ka horeeya, afka wax lagu bartaa qiyaastii boqolkii 90% waa afka Spanish ka, boqolkiina tobona waa afka 10% English, tartiib tartiib ayey u noqotaa boqolkiiba 60/40 marka la gaaro fasalka shanaad.